Indlwana Yokubhalisa - I-Airbnb
Ullapool, Scotland, i-United Kingdom
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Niall
U-Niall Ungumbungazi ovelele
Itholakala enhliziyweni ye-Ullapool Registry Cottage iseduze netheku, amathilomu, izindawo zokudlela kanye nezitolo. Ihlinzeka ngendawo yokuhlala yesimanje, esebenzayo futhi ethokomele, enikeza isisekelo esihle kunoma ubani ovakashela i-North West Highlands. Ikotishi lethu lifaneleka kakhulu imibhangqwana.
I-Registry Cottage iyindawo esanda kulungiswa kabusha e-Ullapool, iza emakethe yokuziphekela ngo-2017. Isendaweni ethule yokugcinwa kwemvelo enhliziyweni yedolobhana leli kotishi liwuhambo lwemizuzu embalwa ukusuka ethekwini, izitolo kanye nezinhlobonhlobo zezindawo ezinhle kakhulu. izindawo zokudlela, amathilomu nama-pubs.
Ivuselelwe yaba sezingeni eliphezulu le ndawo manje isihlinzeka ngendawo yesimanjemanje futhi esebenzayo yokuziphekela lapho ungahlola khona indawo yendawo nesifunda.
I-Ullapool : Ichweba lokudoba elinezixhumanisi zesikebhe eziya e-Hebrides, i-Ullapool ithule kodwa inokuningi okwenzekayo futhi ibekwe enkabeni yokuhlola isifunda nemiphakathi eseduze enyakatho naseningizimu ye-Ullapool.
Sizungezwe izintaba, ugu olukhazimulayo namabhishi, kanye nezilwane zasendle ezisukela ezinkozini, i-pine martin, imikhomo, amahlengethwa, ama-porpoise nezimvu zamanzi. Khuphuka, bhayisikili, shayela noma uthathe uhambo lwesikebhe ukuze ubone okwengeziwe.
Amabha endawo namabhizinisi ahlinzeka ngezilwane zasolwandle ezinhle ezifika ethekwini, anikeza isiphuzo nomculo kusihlwa futhi sinenqwaba yamafestivali endawo, amagalari, izitudiyo nezitolo ongabheka kuzo ukuze uthole izipho.
UNiall Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Ullapool namaphethelo